China Vertical agụụ Focus RF Machine emepụta na suppliers | MENOBeauty
Vetikal agụụ Focus RF Machine
Thermolift Focus RF na Agụụ Nzuzo
40,68 MHz RF ugboro maka mgbochi ịka nká
Thermolift bụ ihe pụrụ iche, ọtụtụ ngwa Radio Frequency (RF) maka ọgwụgwọ na-adịghị emerụ ahụ nke cellulite, ịmịkpọ anụ ahụ na ịkpụkọ ahụ- na-enweghị nkwụsị.
Thermolift patented UniPolar Pro teknụzụ na-enye ndị ọrụ ikike nchịkwa kachasị site na ịgbanye na-enweghị isi n'etiti ọkụ ọkụ nke epidermis na okpomoku miri emi nke abụba subcutaneous. A na-ejikọta ụdị ọnọdụ redio dị iche iche n'otu ngwaọrụ iji rute akwa anụ ahụ niile.
Site na teknụzụ In-Motion TM, Thermolift bụ sistemụ izizi iji nye nsị anụ ahụ na-afụ ụfụ mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Ngwakọta teknụzụ nke Thermolift na-enye ike RF kachasị na anụ ahụ. Ejikọtara ya na nkà na ụzụ na-achịkwa omimi, ike na-etinye uche na mpaghara sub-dermal, na-ahapụ epidermis echekwara. Ọ dị mma ma dịkwa mfe iji
Kpụrụ nke Vacuum Focus RF Machine
Njirimara Thermosharp bụ Dielectric Heating- usoro pụrụ iche nke na - eme ka rediofrequency (RF) dị elu nke 40.68 MHz (na - ezipụ akara ngosi 40,68 kwa nkeji) na anụ ahụ, na - eme ka ngwangwa mmiri ya. Ntughari a na - eweputa esemokwu nke na - eweputa oku di ike ma di ire. Ebe ọ bụ na mmiri na-abụkarị mmiri, ikpo ọkụ sitere na usoro a na-ebute mkpịsị na-enweghị oke n'ime akpụkpọ ahụ na-eme ka eriri ndị dị ugbu a na-akpali akpali nke ịmepụta collagen ọhụrụ ma na-eme ka ọkpụrụkpụ ya na nhazi ya dịkwuo mma. A elu RF ugboro na-enye ohere maka miri emi, homogenous kpo oku nke na-amị edo pụta.
CNC n'afọ iri na ụma mgbali Technology
Nke gara aga: Isi detoxing ịhịa aka igwe
Osote: Vetikal Physiotherapy Diathermy RET CET Agụụ Igwe
Obere obere ihe RF
Igwe akụrụngwa Thermosharp Vacuum